MB 2015 Juun, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Cilmiga fiqiga ayaa muhiim noo ah maxaa yeelay waxay bixisaa qaab aasaasi ah oo aan aaminsanahay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira imminka fiqi ahaaneed ee badan, xitaa gudaha bulshada Masiixiyiinta dhexdeeda. Mid ka mid ah astaamaha lagu dabaqi karo WKG / GCI ee bulshada aaminaada ayaa ah sida ay nooga go'antahay waxa lagu tilmaami karo "fiqiga masiixiga". In kasta oo caqiidada masiixiga si weyn loogu aqoonsaday taariikhda kaniisadda, qaar ayaa ugu yeedhay "caqiido la illoobo" sababta oo ah waa la iska indhatiri karaa marar badan. Si kastaba ha noqotee, gudaha WKG / GCI waxaan aaminsanahay xaqiiqadaas, sida xaqiiqada iyo macnaha Saddexanka, inay wax walba beddelaan.
Baybalku wuxuu barayaa in badbaadadeenu ay ku tiirsan tahay Saddex-jirka. Waxbaristu waxay ina tuseysaa sida qof walboo Eebbe ka ciyaaro door muhiim ah nolosheenna ahaan Masiixiyiin ahaan. Ilaaha Aabbaha ah ayaa nagu soo korsaday annaga oo ah "carruurtiisu aadka u jeclaayeen" (Efesos 5,1). Tani waa sababta uu Eebbe, Ciise Masiix, u qabtay shaqadii lagama maarmaanka u ahayd badbaadadeenna. Waxaan ku nasanay muujinta naxariistiisa (Efesos 1,3: 7) kalsooni ku qab badbaadadeenna maxaa yeelay Ilaaha Ruuxa Quduuska ahi inagu dhex jiraa waa astaanta dhaxalkayaga (Efesos 1,13: 14). Qof walba oo ka shaqeeya Saddex-geesoodka wuxuu leeyahay door gaar ah xagga soo dhoweynta qoyska Eebbe.
In kasta oo aan Ilaah ku caabudno saddex qof oo rabaani ah, waxbaridda Trinity waxay mararka qaarkood dareemi kartaa sidii inay aad ugu adag tahay ficil ahaan. Laakiin haddii fahamkeenna iyo dhaqankeenna ku saabsan waxbarista udub-dhexaadka ahi ay isku raacsan yihiin, tani waxay leedahay awood aad u weyn oo wax looga beddelayo nolosheena maalmeed. Waxaan u arkaa sidan oo kale: Caqiidada masiixiga waxay ina xusuusineysaa inaysan jirin wax aan sameyn karno oo aan ku kasban karno booskeena miiska Rabbiga Ilaaha ah ayaa horay noogu martiqaaday oo aan dhammaystirtay shaqadii lagama maarmaanka ahayd si aan meel uga helno miiska. Thanks to badbaadada Ciise iyo imaatinka Ruuxa Quduuska ah, waxaan u imaan karnaa Aabbaha hortiisa, kuna lug leh jacaylka Ilaaha Saddexmidnimada. Jacaylkani wuu u furan yahay dhammaan kuwa rumaysta sababta oo ah xiriirka weligeed ah, oo aan beddeli karin ee Saddexanka. Si kastaba ha noqotee, tani dhab ahaantii micnaheedu maahan inaannan fursad u helin kaqaybqaadashada xiriirkan. Ku noolaanshaha Masiixa micnaheedu waa jacaylka Eebbe wuxuu awood inoo siinayaa inaan daryeelno kuwa nagu hareeraysan. Jacaylka Saddexanka ah ayaa inagu soo qulqulaya si uu noogu daro; oo annaga ayuu na soo gaadhsiiyaa kuwa kale. Ilaah na uma baahna inaan shaqadiisa dhammeyno, laakiin wuxuu nagu martiqaadayaa qoyskiisa ahaan inaan isaga ku soo biirno. Waxaa naloo siiyay awood inaan jeclaano maxaa yeelay ruuxiisu waa inagu jira. Markii aan ogaado in ruuxiisu igu dhex jiro, ruuxaygu wuxuu dareemaa nafis. Saddexmidnimada, cilaaqaadka ku saleysan Eebbe wuxuu doonayaa inuu ina xoreeyo si aan xiriir wanaagsan iyo macno leh ula lahaano isaga iyo dadka kale.
Aan ku siiyo tusaale ah noloshayda. Wacdiye ahaan, waan la qabsan karaa "waxaan" u sameeyo "Ilaah." Waxaan dhowaan la kulmay koox dad ah. Waxaan si aad ah diiradda u saaray ajandeyda gaarka ah oo aanan garanaynin cidda kale ee qolka ila joogta. Markii aan garwaaqsaday sida aan uga welwelsan ahay shaqada aan u qabay Ilaah, waxaan qaatay daqiiqad aan ku qoslo naftayda oo aan u dabaaldego in Ilaah nala jiro, innaga hoggaamiya oo hoggaamiya. Ma aha inaan ka baqno inaan khalad sameyno markaan ogaanno in Eebbe wax walba gacanta ku hayo. Waxaan ugu adeegi karnaa si farxad leh. Waxay badashaa nolosheena maalinlaha ah markaan xasuusano inayna jirin wax uusan Eebbe sixin. Wicitaankeena Masiixiyiintu maahan culeys culus, laakiin waa hadiyad cajiib ah. Maaddaama Ruuxa Quduuska ahi uu inagu dhexjiro, waxaan xor u nahay inaan kaqeyb galno shaqadiisa adigoon walwal qabin.
Laga yaabee inaad ogtahay in hal ku dhigga WKG / GCI uu yahay: "Waxaa lagu soo daray!" Laakiin miyaad taqaanaa micnaha taasi aniga ahaan shaqsi ahaan? Waxay macnaheedu tahay inaan isku dayno inaan isjeclaanno sida Saddexbalku u jecel yahay - in aan is daryeelno - si aan u aqoonsanno kala-duwanaanta xitaa marka aan wada nimid. Saddexanka Saddexaad waa tusaale wanaagsan oo loogu talagalay Jacaylka Quduuska ah. Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ahi waxay ku raaxeystaan ​​midnimo buuxda, halka ay yihiin kuwo si gaar ah u kaladuwan. Sida Athanasius yiri: "Midnimada Saddex, Saddex Diidmada Midnimada". Jacaylka lagu muujiyey Trinity wuxuu ina barayaa ahmiyadaha xiriirka jacaylka ee ka dhex jira Boqortooyada Ilaahay.
Fahanka Saddex-geesoodka ahi wuxuu qeexayaa nolosha beesheena caqiidada. Halkan WKG / GCI, waxay nagu dhiirrigelisaa inaan dib uga fikirno sidii aan isu daryeeli lahayn. Waxaan rabnaa inaan jeclaano kuwa nagu hareeraysan, ma ahan sababtoo ah waxaan dooneynaa inaan wax uun kasbano, laakiin maxaa yeelay Ilaaheenna waa Ilaah bulshada iyo jacaylka. Ruuxda jacaylka Eebbe wuxuu ina hanuuni doonaa inaan jeclaano kuwa kale, xitaa haddii aysan fududa ahayn. Waan og nahay in ruuxiisu uusan ku dhex noolayn oo keliya, laakiin sidoo kale ku dhex jiro walaaleheenna iyo walaasheena. Taasi waa sababta aynaan u wada kulmin oo keliya Axadaha cibaadada - sidoo kale waxaan wada cunnaa cunno oo waxaan sugeynaa waxa Ilaah ku sameyn doono nolosheena. Taasi waa sababta aan gargaar ugu fidinno dadka baahan ee xaafadeena iyo adduunka oo dhan; waa sababta aan ugu ducayno bukaanka iyo daciifka. Waxay u tahay jacayl iyo aaminsanaanteena Trinity.
Markaan barooranno ama aan isla dabaal-degno, waxaan isku dayeynaa inaan isjeclaanno sida midnimadu u jeclaato Ilaah. Haddii aan ku noolaano fahanka maalinlaha ah ee Saddexanka, waxaan aqbalnaa si xamaasad leh: "In la ahaado buuxinta kan wax walba buuxiya." (Efesos 1,22: 23). Salaadiintaada, salaadda aan is-lahayn iyo taageeradaada lacageed waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah bulshada wadaagaas oo ay qaabeeyaan fahamka Saddex-geesiga. Waxaan ku buuxsamay jacaylka Aabaha xagga madaxfurashada wiilka, jiritaanka Ruuxa Quduuska ah, oo aan u qaadnay daryeelka jirkiisa.
Cunto loo diyaariyey saaxiib jiran, ilaa farxadda guusha xubin reerka ka mid ah, tabaruc ku caawisa kaniisada inay sii wadato shaqada; waxaas oo dhami waxay noo oggolaadaan inaan wacdinno injiilka injiilka.
Jacaylka Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah,